मनछुने स्टाटस लेख्दै दिया मिर्जा र साहिलले तोडे ११ वर्षको सम्बन्ध - Everest Dainik - News from Nepal
मनछुने स्टाटस लेख्दै दिया मिर्जा र साहिलले तोडे ११ वर्षको सम्बन्ध
मुम्बई । सम्बन्धविच्छेद हुँदा एकले अर्कोमाथि आरोप लगाउने परिपाटी चल्दै आएको बेला बलिउड कलाकार दिया मिर्जाले भने निकै सम्मानित वक्तव्यसहित श्रीमानसँग अलग भएको घोषणा गरेकी छिन् ।
हाल निर्माताको भूमिकामा देखिने कलाकार दीया मिर्जा र उनका श्रीमान साहिल सांघाले संयुक्तरुपमा सम्बन्धविच्छेद भएको जानकारी दिएका हुन ।
याे पनि पढ्नुस श्रीमानको लिङ्ग सानो भएकै कारण सम्बन्ध विच्छेद !
१८ अक्टुबर २०१४ का दिन उनी दुबैले बिहे गरेका थिए । उनीहरुबीच ११ वर्षदेखि सम्बन्ध थियो । बिहेअघि दुबै व्यवसायिक साझेदारसमेत थिए ।
साहिल र दिया मिर्जाले संयुक्तरुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अलग हुने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन । “११ वर्षसम्म सँगै जिन्दगी बिताएपछि हामी दुबैले सहमतिका साथ अलग हुने निर्णय गरेका छौं । हामी साथी रहिरहनेछौं र हामीबीचको प्रेम र सम्मानको सम्बन्ध अझै पनि कायमै रहनेछ ।” उनीहरुले लेखेका छन्, “हामीहरुको जीवनयात्रा अलग अलग बाटोतर्फ मोडिएपनि हामीबीचको एउटा बन्धनका लागि हामी सधैं एकअर्काप्रति आभारी रहनेछौं ।”
याे पनि पढ्नुस प्रेम विवाह गरेको एक महिनामै सम्बन्ध विच्छेद !
उनीहरुले निरन्तर प्रेम र समर्थनका लागि आफ्ना परिवार, साथीभाई र मिडियालाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै यो विषयमा अब कुनै टिप्पणी नगर्ने समेत बताएका छन् ।
दियाले अन्तिमपटक राजकुमार हिरानीको चलचित्र सन्जुमा रणबीर कपूरसँग अभिनय गरेकी थिइन । वर्ष २००१ मा उनले बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन ।
याे पनि पढ्नुस दैलखमा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै
ट्याग्स: Divorce, Diya Mirja, दीया मिर्जा